पहिलोपल्ट जहाज उडाउँछु भन्दा पनि मानिसले गिज्याएका थिए
- किशोर केसी, अनुसन्धानदाता
ललितपुरको कुमारीपाटीमा एउटा साइबर क्याफे चलाएर बस्छन् उनी । खासमा यो साइबर उनको बाहिरी पाटो मात्र हो । भित्र उनी अपत्यारिलो वैज्ञानिक अनुसन्धान गरिरहेका छन् । उनी पृथ्वीको गुरुत्व (ग्राभिटी) आकर्षणबाट बिजुली निकाल्ने पद्धतिको विकास गरिरहेका छन् । ८ वर्षदेखि यहि अन्वेषणमा उनले करिव एक करोड रुपैंया खर्च गरिसकेका छन् । अनुसन्धानका लागि आफ्नो घर बैंकमा धरौटी राखेर काम सुरु गरेका किशोरको डेढ करोडको घर ब्याज नतिरेका कारण बैंकको हातमा पुगेको छ । बैंकले ३५ दिने सुचना जारी गरेर घर खाली गर्ने पत्र दिएको म्याद पर्सी आइतवार सकिदैछ । त्यतिमात्र होइन, जहाँ उनको अनुसन्धानको काम भैरहेको छ, घर भाडा तिर्न नसकेर उक्त घर नै छाड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । तैपनि उनी विचलित छैनन् । 'ठूलो काम गर्दा समस्या आउँदो रहेछ, तर म आत्तिएको छैन ।' आत्मविश्वासका साथ किशोरले साप्ताहिकसँग भने, 'यो अनुसन्धान पूरा सफलतापूर्वक सम्पन्न हुनेबित्तिकै मेरो मात्र होइन, देशको आर्थिक अवस्थालाई नै बेजोड सहयोग पुर्‍याउने सामर्थ राख्न सक्छ ।'
घर-परिवारलाई विचल्ली बनाएर अनुसन्धान गरिरहनुभएको रहेछ । के अनुसन्धान गरिरहनुभएको छ ?
कुनै पनि प्रचलित स्रोत प्रयोग नगरी बिजुली निकाल्ने अनुसन्धान गरिरहेको छु । अहिलेसम्म पेट्रोलियम पदार्थ, घामको किरण, हावाको बहाव, कोइला, हाइड्रोपावर, न्युक्लियर जस्ता साधनले बिजुली निकालिन्छ । म भने ती कुनै पनि साधन प्रयोग नगरी उर्जा निकाल्ने प्रयासमा छु ।
कुनै पनि साधन प्रयोग नगरी बिजुली निकाल्छु भन्नु त पागलपन नै हो नि, होइन र ?
हो, जसले पहिलोपल्ट यो कुरा सुन्छ, मलाई पागल भन्ने पनि भेटिन्छन् । यस्ता कुरा सुन्दा पहिले-पहिले चित्त दुख्थ्यो, अहिले दुख्दैन । किनभने पहिलोपल्ट पृथ्वी गोलो छ भन्ने वैज्ञानिकलाई मृत्युदण्डको फैसला सुनाइएको थियो भनिन्छ । राइट दाजुभाइले हामी चराजस्तै उड्ने गाडी (हवाईजहाज) बनाउँछौं भन्दा उनीहरूलाई पागल भनिएको थियो । जब-जब बैंकले घर लिलामको पत्र पठाउँछ, म पागलपनको अवस्थामा पनि पुगें । इन्टरनेटमा केही वैज्ञानिकहरूको जीवनी पढ्छु । उनीहरूको मेरो भन्दा बिजोग भएको थियो । तै पनि कुनै पनि प्रचलित स्रोतको उपयोग बिना नै विजुली निकाल्छु भन्ने कुराले मलाई कहिले पनि विचलित बनाएको छैन ।
बिना कुनै इन्धन बिजुली निकाल्न सक्नुहुन्छ त ?
शतप्रतिशत निकाल्छु । त्योभन्दा बढी प्रतिशत हुँदैन, नत्र त्यति प्रतिशत बिजुली निस्कन्छ भन्थें । बिजुली ननिस्कने कुनै कारण छैन, त्यसैले यसमा कुनै द्विविधा छैन ।
कसरी निस्कन्छ बिजुली ?
पृथ्वीको गुरुत्वाकर्षणबाट त्यो उर्जा निस्कन्छ । यसलाई अझ सरल भाषामा भन्नु पर्दा पृथ्वीको गुरुत्वाकर्षणसँग मेल खाने यन्त्र हो । त्यो यन्त्रले पृथ्वीको गुरुत्वोकार्षण अनुरुप आफ्नो चाल बनाउँदछ र त्यो चालको शक्तिबाट उर्जा निस्कन्छ । यो उर्जा विजुली हो । उर्जालाई मात्र ध्यान दिएर हेर्दा मैले के पाएँ भने पृथ्वी पुरै एउटा उर्जाको गोला हो । यति ठूलो शक्तिलाई उपयोग गरेर विजुली निकाल्न सकिन्छ भन्ने मेरो अन्वेषण हो ।
संसारमा ऊर्जाको यति ठूलो माग छ । न्युटनले ३ सय वर्षअघि नै पृथ्वीको गुरुत्वाकर्षणको सिद्धान्त पत्ता लगाएका हुन् । संसारका ठूला-ठूला वैज्ञानिकहरूले यो कुरा सोचेनन् होला त ?
तपाईंले एकसाथ तीनवटा कुरा गर्नुभयो । एउटा संसारमा ऊर्जाको ठूलो माग छ, सही हो । दोस्रो न्युटनले ३ सय वर्षअघि नै पृथ्वीको शक्तिको सिद्धान्त दिएका हुन् । यस्तो बेला विश्वका वैज्ञानिकहरूले उक्त शक्तिबाट बिजुली निकाल्न सकिन्छ भन्ने सोचेनन् होला त भन्ने, अवश्य नै सोचे, प्रयास पनि गरे । पछिल्लो समयमा यो खोजी निकै तिब्र पनि भएको छ । त्यसमाथि विश्वमा सबैभन्दा बढि विजुली समस्यामा नेपाल नै परिरहेकाले हुनसक्छ, यसमा हामी बढि लाग्यौं । फलस्वरुप म पनि यसको अनुसन्धानमा जुटें ।
संसारका साधन-स्रोतसम्पन्न चर्चित वैज्ञानिकले पत्ता लगाउन नसकेको कुरा तपाईंको दिमागमा कसरी फुर्‍यो ?
जहाँ अभाव हुन्छ, त्यहीँ नयाँ चेतना फुर्छ । जुनबेला मैले साइबर क्याफे चलाउँछु भनेर घर भाडामा लिएँ, लोडसेडिङ उत्कर्षमा पुग्यो । जेनरेटर लिएँ तर डिजेलको यस्तो अभाव हुन थाल्यो, घन्टौं लाइनमा लाग्दा पनि नपाइने । कति समय त डिजेल नै नपाइने अवस्था आयो । यसको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भन्दा पृथ्वीको गुरुत्वाकर्षणलाई स्रोत देखे्र । लोडसेडिङ र डिजेलको अभावले यसमा लाग्न प्रेरणा दियो । जब त्यसका लागि अध्ययन सुरु गरें, मेरो अनुमान सहि हुन थाल्यो । त्यहि अनुरुपको इन्जिनियरिङ् तयार गरेें । अहिले त्यसको अन्तिम चरणको काम गर्दैछु ।
यसअघि कुनै अनुसन्धान गर्नुभएको थियो ?
सानैदेखि प्रविधिमा रुची राख्थें । एकपल्ट मेरो नयाँ पल्सर बाइक चोरी भयो । सुरक्षाको उचित बन्दोबस्त नभएका कारण बाइक हराएको ठहर गरेर विशेष साँचो बनाएँ । कसैले बाइक छुँदा म्युजिक बज्ने, मोबाइलमा सिग्नल आउने, जबरजस्ती गरे अटोमेटिक लक हुने व्यवस्था मिलाएँ । यस्ता धेरै साँचो बनाएर बेचें । पछि बजारमा मेरो भन्दा सस्तो सामग्री आएपछि उक्त काम रोकियो । त्यसपछि एउटा कलेजमा सयौं विद्यार्थीलाई एकसाथ मोनिटरिङ गर्न सक्ने प्रविधि जडान गरेको थिएँ । त्यसले राम्रो सफलता पाएको थियो । पानी पर्दा मोटरसाइकल चालक भिज्ने समस्या अन्त्य गर्न अटोमेटिक बर्सादी बाइकमै जडान गर्ने प्रविधि बनाइरहेको थिएँ । यस्ता धेरै कुरा दिमागमा आउँथे तर जबदेखि म लोडसेडिङको मारमा परें, बिना इन्धन बिजुली उत्पादन गर्ने काममा लागें । आज ८ वर्ष भयो, यसैमा लागिरहेको छु ।
कति काम सकियो, तपाईंको कामको परिणाम कहिलेसम्म आउँछ ?
९० प्रतिशत काम सकियो । विभिन्न किसिमका परीक्षण पूरा भएका छन् । अब दुईवटा परीक्षण बाँकी छन् । अन्तिम काममा लागिरहेको छु । बैंकले घर लिलामी गर्ने पत्र पठायो । त्यहि बेला जुन स्थानमा परीक्षण भैरहेको थियो, त्यहि घर पनि भाडा नतिरेका कारण छाडनु पर्ने अवस्था र त्यससँगै आउने अन्य परिस्थिति जटिल बनेपछि सामाधान खोज्न बाहिर निस्केको हुँ । बुवाले साह्रै दु:ख गरेर बनाएको घर, त्यो पनि उहाँ बिरामी भएका बेला लिलामीमा जान थालेपछि मैले काम नै गर्न सकिनँ ।
यस्तो काममा सरकारले सहयोग गर्छ नभए साथीभाइले सहयोग गर्छन् । घर बैंकमा राखेर यस्तो काम गर्नु त पागलपन नै हो नि । होइन र ?
जब मेरो दिमागमा यो कुरा फुर्‍यो, पहिले केही परीक्षण गरे । बिजुली ननिस्कने कुनै कारण थिएन । खुसी हुँदै सबैजसो संस्था र उच्च पदस्थ व्यक्ति र नेताहरूसम्म गएँ । उहाँहरूमार्फत अझ माथिसम्म पुग्ने प्रयास पनि गरें । हाम्रो वैज्ञानिकहरूको संस्था नास्टसम्म पुगें । सबैले ग्राभिटीबाट बिजुली निस्कनै सक्दैन, यसरी निस्कने भए खाडी मुलुकबाट किन पेट्रोलियम पदार्थ मगाउनुपथ्र्याे भनेर हत्तोसाहित गर्नुभयो । कुनै पनि व्यक्तिले मलाई दोस्रो पटक भेट्नै चाहेनन् । अरूले ममाथि किन विश्वास गर्ने ? मैले त्यस्तो के गरेको छु र ? भन्ने प्रश्न आएपछि बल्ल मेरो होस खुल्यो र ऋण काढेरै काम गर्छु भनेर लागेको हुँ ।
बिना कुनै साधन ऊर्जा निकाल्नु सामान्य कुरा होइन । तपाईंसँग क्षमता भए अमेरिका-जापानजस्ता विश्वका सबै मुलुकले तपाईंका लागि रातो कार्पेट ओछ्याउँछन्, खातिरदारी गरेर तपाईर्ंको कामलाई सघाउँछन्, सघाउँदैनन् र ?
पहिलो कुरा म नेपालमै यो काम गर्न चाहन्छु । काम सुरु भैसकेको छ । सुरु मात्रै होइन, अन्तिम चरणसम्म नै पुगिसक्यो । अर्को कुरा, ऋण काढेर काम सुरु गरेपछि बीचैमा अलपत्र पार्ने कुरा पनि भएन । जति-जति काम बढ्दै गयो, परीक्षण सफल हुँदै गयो । त्यसैले पनि मैले अर्को बिकल्प सोच्दै सोचिन । कतिपय साथीभाइले मप्रति विश्वास गरेर ऋण नदिएका होइनन्, तर समयमा काम पूरा गर्न नसक्दा उनीहरूलाई पनि ब्याजसहित ऋण तिर्नुपर्ने भयो । अहिले म बैंक र साथीभाइको दोहोरो ऋणमा फसेको छु ।
ग्राभिटीबाट बिजुली निकाल्ने तपाईंको मुख्य सूत्र के हो, बताउन मिल्छ ?
एकदमै मिल्छ । विश्वलाई त्यहि सूत्र बताउन, त्यसलाई प्रमाणित गर्न नै सबै कुरा छाडेर, घरबार बिगारेर म यसमा लागेको हुँ । यत्ति हो, अहिले समय आइसकेको छैन । काम पुरा हुने वित्तिकै म यो सुत्र सार्वजनिक गर्छु । यो सुत्र आफ्रनो नाममा दर्ता गर्नुअघि यसलाई गोप्य राख्नु मेरो बाध्यता हो ।
तपाईंले सुत्र नबताए पनि पृथ्वीको गुरुत्वाकर्षणबाट विजुली निकाल्ने कुरा बताइसक्नु भएको छ । ग्राभिटीसम्बन्धी जानकारी लाखौं मानिसलाई थाहा छ, धेरैले यसलाई प्रयोग गरेर ऊर्जा निकाल्ने प्रयत्न पनि गरे । तपाईं आफूले नै यो काम फत्ते गर्छु भन्ने सोच अलि अनौठो होइन ?
यो अहिलेको लागि शंकाकै कुरा हो । किनभने सबै कुरा बाहिर आएको छैन । तर चाँडै यसको वास्तविकता बाहिर ल्याउने छु । मैले जे काम गरिरहेको छु, त्यो अरुतिर अनुसन्धान भैरहेको वा हुन लागेको कुरा बाहिर आएको छैन । सायद अरुलाई ध्यान नगएको पनि हुनसक्छ । हामी लोडसेडिङ्को चर्को मारमा परेका कारण हामीलाई यो कुराले बढि पिरोलेको पनि हुनसक्छ । म अहिले नै यो कुरा मैबाट हुन्छ भनेर दावी गरिरहेको छैन तर केही न केही परिणाम निस्कन्छ भनेर विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।
मानौं तपाईंको अन्वेषण सफल भयो र बिजुली निकाल्नुभयो, नेपालले के फाइदा पाउँछ ? संसारमा के परिवर्तन हुन्छ ?
यो सफल भएपछि गुरुत्वाकर्षणको बलबाट नयाँ काम भएको विषयलाई लिएर नेपालको नाम एउटा उपलब्धिका रुपमा आउने छ । विजुली निस्किएपछि नेपाल सहित विश्वका सबै देशलाई उर्जाको समस्याबाट मुक्ति हुनेछ भने यसले वातावरण र अर्थतन्त्रलाई पनि ठूलो प्रभाव पर्ने छ । यसबाट निस्किएको विजुलीले कुनै पनि किसिमको प्रदुषण नगर्ने भएकाले यसको ठूलो महत्व छ ।
राम्रो सपना देख्नुभएको रहेछ, कति समयपछि सपनाबाट ब्युँझिनुहुन्छ ?
तपाईंले यसो भन्दा म रिसाउँदिनँ, किनभने यसरी अविश्वास गर्ने तपाईं पहिलो व्यक्ति होइन । तैपनि यति लेखेर राख्नुहोस्, २०७३ सालभित्रमा म गुरुत्वाकर्षणबाट बिजुली निकालेरै छाड्छु ।